१६ वर्षका एलेक्स धिताल आफूलाई साइबर सेक्युरिटीका रिसर्चर र इथिकल ह्याकर भनेर चिनाउन चाहन्छन् । केही प्रसिद्ध संस्थाका लागि बग बाउन्टी गरिरहेका उनी युवा र विद्यार्थीलाई प्रविधिको सही प्रयोगका लागि सचेतना दिने कार्यक्रममा समेत सक्रिय छन् :
कम्प्युटरमा विशेषगरी तपाईं के गर्न रुचाउनुहुन्छ ?
कम्प्युटरमा म सिस्टमले कसरी काम गर्छ, सर्भरले कसरी काम गर्छ, कसरी तिनीहरूले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म डाटा ट्रान्स्फर गर्छन् र तिनीहरूमा केके सेक्युरिटी लुपहोल छन् भन्ने बारेमा बुझ्न खोज्छु ।
अनलाइनबाटै यस्ता शीप र ज्ञान हासिल गर्न सम्भव छ त ?
यदि आफूसँग रुचि र लगाव छ भने केही कुरा पनि असम्भव छैन । अनलाइनबाटै धेरै ज्ञान लिन सकिन्छ । यसको लागि पहिला हामीले एचटीटीपी, एफटीपी ब्राउजरबारे बेसिकबाटै सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि धेरै अनलाइन साइटहरू छन् । जस्तै, जबअपभचज्ञण्ज्ञ जहाँबाट आवश्यक ज्ञान लिन सकिन्छ र त्यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ ।
तपाईंलाई नेपालको साइबर स्पेस सेक्युर छ जस्तो लाग्छ ?
लाग्दैन । सेक्युरिटीका लागि ध्यान नै पुगेको छैन । किनभने हामीसँग यो फिल्डको लागि उपयुक्त मेनपावर छैनन् । अस्ति भर्खर पनि नेपालको एनआईसी एसिया बैंकको स्विफ्ट सर्भर ह्याक भएको समाचार हामीले पायौं । यो फिल्डमा मुख्यतः बैंकिङ सेक्टरमा थ्रेट छ ।
तपाईंको उमेरका धेरै किशोरहरू आफ्नो शीपको गलत प्रयोग गरिरहेका छन् । के सन्देश दिनुुहुन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने किशोरको थ्रेटभन्दा पनि हामीलाई विदेशी आक्रमणकारीहरूको बढी थ्रेट छ । तर, अहिलेका युवाले आफ्नो स्किलको गलत रूपले प्रयोग गरिरहेका छन् । जस्तै, अरुको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गर्ने, स्कुलको वेबसाइट डाउन गर्ने काम भइरहेको छ । यसकारण युवालाई आफ्नो स्किल पोलिस गर्दै राम्रो कामका लागि प्रयोग गर्न सन्देश दिन्छु ।
भविष्यमा तपाईं के बन्ने ?
भविष्यमा इथिकल ह्याकर बन्ने सपना छ । नेपालमा पनि सेक्युरिटी प्रोफेशनलको उत्पादन गर्न सकियो र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने स्कोप धेरै राम्रो छ । साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी अवेयरनेश गर्न जरुरी छ ।